Umfucumfucu We-Basin & Odor Trap
Ama-Basket & Sink Strainers
Ukusingathwa Kokugeza Nokuchichima
Imfucumfucu Yokugeza Imfucuza
Amapayipi nama-Closet Flanges
Imfucumfucu Yethreyitha Yeshawa
Finyelela Iminyango & Amaphaneli
Izesekeli Ama-GRD wezohwebo
Amapompo okususa i-Condensate
Sidewall / Uphahla
I-Lanced Return Grilles
Okubaluleke Kakhulu Kwekhwalithi
Kuqondile Aluminium Return Air Grille
I-Vertical Aluminium Floor Register Diffuser
Izinkuni Bhalisa Flushmount Floor Bhalisa ngensimbi A ...
Plastic Bhalisa Louvered Floor Register ABS White a ...
I-Wood Register Oak Floor Louvered Register Oak Oqinile
I-Steel Baseboard Return Air Grille Emhlophe
UPC Plastic Tube Ngocingo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zepulasitiki zepulasitiki zivunyiwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, ayatholakala kumamodeli ajwayelekile noma aphephile we-plenum.
Njengenye yezinkampani ezilenga kakhulu ukuncintisana, izibopho zethu zezipikili zisetshenziselwa ukukhweza amapayipi ezindongeni, ophahleni naphansi. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, Middle East nase-Asia. Futhi, indawo yokuxhumana yesiyingi esingenhla nesingezansi inama-gaskets amabili epulasitiki ngaphakathi.
I-Adjustable Pipe Support Assembly ene-U-bolt
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, umhlangano wethu wokuxhaswa wepayipi ongaguquguquki nge-U-bolt wenzelwe ukuxhasa ipayipi evundlile kusuka kuma-stanchion lapho kudingeka khona ukulungiswa mpo. Futhi ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-DWV Pipe Hanger isetshenziselwe ukulengisa ipayipi le-Copper kusuka ku-Object
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu yenkampani, DWV yethu ipayipi iziphanyeko anganikeza ukufakwa ngokushesha. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, ukukhiya isikulufa kungagcina ipayipi livikelekile ngokuhlelekile.
Lashukumisa Umoya Pipe Ngocingo nge Rubber
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu yenkampani, lashukumisa yethu umoya omncane ipayipi izibopho zenjoloba zenzelwe okusheshayo uvala uhlelo. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu nase-Asia. Futhi, ulwelwesi lwenjoloba lwe-EPDM lusetshenziselwa ukuvimbela umsindo.
I-Wood Diffuser Solid Oak Baseboard Diffuser Natural Oak ne-Light Oak
Ukwakhiwa okuqinile kwe-oki
Isibuko sobuso esenziwe ngentambo
I-faceplate esusekayo yokufakwa kwe-esay nokuhlanzwa
Isiphetho esitholakalayo: Oak Natural, Light Oak
16 Gauge Steel Boca Plate
Njengomunye wabalengisi benkampani abancintisana kakhulu, amapuleti ethu eBoca athole ukuthandwa kakhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika.
I-41 * 21 C-Channel Yensimbi Yesistimu Yokuxhaswa Kwensimbi enezimbobo ezihlanganisiwe
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ama-c-channels ethu asetshenziselwa amathuba amaningi okuhlanganisa izinto ezenziwayo. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Heavy Duty J-isiphanyeko One-Piece Pipe Ibhande
Njengomunye wabalengisi benkampani abancintisana kakhulu, umsebenzi wethu osindayo j-hangers bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Izinkuni Bhalisa i-Flushmount Floor Bhalisa nge-Steel Adampable Damper
* Imininingwane * Ukupakisha & Ukuhambisa Ukupakisha Imvamisa ama-20 ama-PC / ibhokisi ngomoya; ngokuveza isikhathi sesampula Ngezinsuku eziyi-7 * Izicelo zisetshenziswa kakhulu ezakhiweni zokuhlala. * Ingabe Umkhiqizo Ubonisa Kanjani Ikhwalithi Yawo? . Ukulawulwa Okunciphisa Iphrofayili Ephansi: Iswishi ekhangayo yokonga isikhala isebenza kalula. . Awekho ama-Sharp Edges: Stamping stamping nokuqedela ngesandla kuqinisekisa ukuthi i-e ...
Plastic Tube Ngocingo
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zepulasitiki zepulasitiki ziyatholakala kumamodeli ajwayelekile noma aphephile we-plenum. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, ama-notch amise okwenziwe ngo-v enza kube lula ukungena kumashubhu.
I-Screw-in Clamp ngeRubber (Elungisiwe)
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zokugoqa ezinenjoloba zisetshenziselwa ukukhweza amapayipi ezindongeni, ophahleni naphansi. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, Middle East nase-Asia. Futhi, ukufakwa kwerabha ye-EPDM kuklanyelwe ukunciphisa umsindo.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/9
Ikheli: Lingang Industrial Zone, Xizhou Town, Xiangshan County, Ningbo Idolobha, isifundazwe Zhejiang, China
Ucingo: +86 574 6584 8998
UMOYA OYINGCWELE: braden.chen@ningborunner.com